Cheap BB Fatịlaịza igwekota igwe na ndị na - arụ ọrụ | YiZheng
BB Fatịlaịza igwekota igwe A na-eji ya mee ihe n'ụzọ zuru ezu ma na-aga n'ihu na-agbapụta ihe ndị ọzọ na usoro mmepụta nke ijikọta fatịlaịza. Akụrụngwa a bụ ihe edere na imewe, ịgwakọta na nkwakọ ngwaahịa, yana agwakọta, ma nwee ike ịrụ ọrụ.
Gịnị bụ BB Fatịlaịza igwekota igwe?
BB Fatịlaịza igwekota igwe bụ input ihe site na nri eweli usoro, nchara bin na-agbago na ala na-eri nri ihe, nke ozugbo atara n'ime igwekota, na BB fatịlaịza igwekota site pụrụ iche esịtidem ịghasa usoro na pụrụ iche atọ akụkụ Ọdịdị maka ihe inggwakọta na mmepụta. Mgbe ị na-arụ ọrụ, ihe ngwakọta na-agagharị na-agagharị agagharị, ihe ndị na-agbapụta ihe na-emegharị anya, fatịlaịza na-anọ n'ime ihe maka obere oge, wee daa na-akpaghị aka site n'ọnụ ụzọ ámá.
Enwere ike ịhazi igwe fatịlaịza BB dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Kedu ihe eji eme nri BB Fatịlaịza?
BB Fatịlaịza igwekota igwe merie ngwakọta chromatography na nkesa na-akpata phenomena kpatara site na akụkụ dị iche iche nke akụrụngwa na ngwongwo, wee si otú a mee ka izi ezi nke dosing dịkwuo mma. Ọ na-edozikwa mmetụta dị na sistemụ nke akụrụngwa, ihe eji arụ ọrụ, ikuku ikuku, ịgbanye ụda ihu igwe wdg. Ọ nwere njirimara nke oke nkenke, ọsọ ọsọ ọsọ, ndụ ogologo, wdg, nke bụ ezigbo nhọrọ na fatịlaịza BB ( agwakọta) onye na-emeputa ihe.
Ngwa nke BB Fatịlaịza igwekota
Na BB Fatịlaịza igwekota igwe tumadi eji organic fatịlaịza, onyinye fatịlaịza na n'okpuru ájá mkpoko nke kwes ike osisi, na ya nwekwara ike-eji na chemical nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, ụlọ ihe na ndị ọzọ ọrụ.
Uru nke BB Fatịlaịza Mixer
(1) Akụrụngwa ahụ na-ekpuchi obere ebe (25 ~ 50 square mita) ma nwee obere ike ike (ike nke akụrụngwa niile erughị 10 kilowatts kwa awa).
(2) The isi engine ka nke ulo oru igwe anaghị agba nchara, na akara usoro nwere ike adabara dị iche iche aka ike ọrụ.
(3) ịmụta abụọ-seismic nchedo na multi-ogbo nzacha technology, ezi n'ihe.
(4) mixgwakọta ngwakọta, nkwakọ ngwaahịa mara mma, enweghị nkewa nke ihe na usoro nkwakọ ngwaahịa, ntụgharị aka ike nke njikọta agwakọta nke 10-60kg, na-emeri nkewa nke nnukwu ihe na mmepụta na usoro nkwakọ ngwaahịa.
(5) Onye na-eme ihe na-eme ka ikuku na-agba ume, nri nke abụọ nke nha, mmụba onwe ya na mmụba ọtụtụ ihe.
Ngosipụta nri fatịlaịza BB
Nhọrọ Ngwaọrụ BB Fatịlaịza
Ngwakọta fatịlaịza BB nwere nkọwa dịgasị iche iche, na-ewepụta oge elekere nke 7-9T, 10-14T, 15-18T, 20-24T, 25-30T, wdg; dika ihe agwakọtara, enwere 2 na 8 ụdị ihe.
Ihe nha ziri ezi
85% (enweghị ntu oyi)
Nke gara aga: Disc igwekota igwe
Osote: Vetikal Fatịlaịza igwekota
Okwu Mmalite Gịnị bụ kwụ Fermentation tank? Igwe na-ekpo ọkụ ọkụ na nsị anụ na-agwakọta tankị na-ebugharị ọkụ ọkụ nke anụ ụlọ na anụ ọkụkọ, ihe mkpofu kichin, sludge na ihe mkpofu ndị ọzọ site na iji ọrụ nke microorganisms iji nweta ọgwụgwọ sludge agwakọta nke bụ nsogbu ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Ugboro abụọ-axle Chain Fatịlaịza Crusher Machine? Ugboro abụọ-axle Chain Crusher Machine Fatịlaịza Crusher na-abụghị nanị na-azọpịa lumps nke organic fatịlaịza mmepụta, kamakwa ọtụtụ-eji chemical, ụlọ ihe, Ngwuputa na ndị ọzọ ọrụ, na-eji akwa siri na-eguzogide MoCar bide yinye efere. Ndị m ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine? The Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher bụ otu n'ime ndị akacha eji ndinuak akụrụngwa na compound fatịlaịza ụlọ ọrụ. Ọ nwere mgbanwe siri ike maka ihe nwere nnukwu ọdịnaya mmiri ma nwee ike iji nwayọ na-eri nri na-enweghị igbochi. Ihe na-abanye site na f ...